Ciidamada Jabuuti Oo Joojiyay Dagaalkii ka Socday Dhuusamareeb Iyo Wada-hadalo Caawa Bilowday. -
Waxaa istaagay dagaal ka socday Saacaddo badan Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug Sidda ay sheegeen Mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug.
Ciidanka dowladda Jabuuti ayaa ku guuleystay joojinta dagaalka, waxaan ay ku guuleysteen in labadda dhinac wadahadal galaan.
Odayaal, Ganacsato iyo siyaasiyiin ayaa la sheegay in caawa magaalada Dhuusomareeb ka wadaan xal u helida xiisada dagaal ee halkaasi ka jirta, waxa ayna xubnahan ku mashquulsan wada xaajoodka doonayaan in xabada marka hore la joojiyo.
Madaxda maamulka Galmudug ayaa laga soo xigtay in aysan dagaal marnaba dooneyn balse kooxda Ahlu sunna ku eedeeyay in rabsho wadaan , waxa ayna madaxda Galmudug codsadeen in kooxdaasi isa soo dhiibaan si xal nabadeed loo gaaro.
Dagaalka maanta ilaa xalay ka socday magaalada Dhuusomareeb ayaa la sheegay in ay ka dhasheen khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dhinacyada dagaalamay iyo waliba dad shacab ah .
Maamulka Galmudug iyo Kooxda Ahlu Sunna ayaa midbo midka kale ku eedeeyay dagaalka ka bilowday Dhuusomareeb, dagaalkan ayaana cabsi badan galiyay caasimada Galmudug ee Dhuusomareeb ay wada joogaan Madaxda Galmudug iyo Hogaanka Ahlu Sunna.
Shacabka ku nool magaalada Dhuusomareeb ayaa ka cabsi qaba in mar kale magaaladaasi ka bilowdo dagaal dhax mara ciidamada dowlada ee taabacsan maamulka Galmudug iyo ciidamada Ahlu Sunna ee horey u maamuli jiray Dhuusomareeb.